Gebi baraf ah oo dad uu ku dumay ku laayey Talyaaniga - BBC News Somali
Gebi baraf ah oo dad uu ku dumay ku laayey Talyaaniga
Image caption Khariid muujinaysa magaalada shilku ka dhacay
Sarkaal ka tirsan shaqaalaha gurmadka Talyaaniga ayaa sheegay in tiro dad ahi dhinteen ka dib markii gebi baraf ahi ku soo dumay hudheel ay deganaayeen. Waxaana la rumaysanyahay in dhulgariirkii Arbacadii dhacay sababay in gebigaa barafka ahi soo dumay.
Shaqaalaha gurmadka ayaa xalay oo dhan la daalaa dhacayey barafka si ay u gaadhaan hudheelkaas oo u dhow buurta Gran Sasso oo ku taal gobolka Abruzzo.
"Dad badan baa dhintay" ayuu yidhi Antonio Crocetta, oo ah madaxa kooxda gurmadka ah.
Ilaa 30 qof ayaa ku jiray hudheelka Rigopiano markii barafku ku soo dumay.
Saqafka ayaa qaybi duntay waxaana shilkan ku wargeliyey shaqaalaha gurmadka dadka deegaanka ah. laakiin duufaan baraf ah oo da'aya ayaa xidhay jiadkii oo dhan waxaana adag in la gaadho huteelka. Warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegay in kooxii ugu horraysay ee gurmad ahi gaadheen lixdii subaxnimo ee saacadda Geeska Afrika.
Dhulgariirro is daba joog ah ayaa ku dhuftay badhtamaha Talyaaniga oo kii ugu dambeeyay dhacay maalintii Arbacada, waxaana meelo fog fog oo dalka ku yaal laga dareemayey gariirka.